Malunga nathi -Toptag Technology Co, Ltd.
Emanzi / eyomileyo ye-RFID Inlay
Iilebhile zokulwa nomgunyathi zeRFID
Ithegi yobucwebe beRFID
Ithegi yeThala lencwadi leRFID
I-RFID Ifestile ye-Windshield
I-RFID iTag ekhethekileyo
Ithegi yentsimbi ye-RFID
Ingxelo yeRFID yodongwe
RFID Isilinda Tag Tag
I-RFID yokuhlamba iimpahla
Itywina leRFID yoTywina
I-RFID iTek Tag
Inkunkuma ye-RFID yeNkunkuma
Ibhendi yesandla esilahlayo
Ibhande leWristband yePVC
Ulawulo lwezilwanyana lweRFID
Isilwanyana / i-Petchip chip
IMicrochip Scanner / Reader
Ijinga leNyawo lehobe
I-Shenzhen TopTag Technology Co., Ltd isungulwe ngo-2008 kunye neeofisi ezimbini eziphambili eziseHong Kong naseShenzhen, eChina. I-TopTag isekwe liqela labantu abanomdla kunye noyilo olunentengiso ye-RFID kunye namava okuvelisa.
I-TopTag igxile kwiithegi ezahlukeneyo zeRFID kunye neelebhile ezinobume obahlukeneyo kunye nezinto. Iimpawu zethu zisusela kumaza asezantsi ukuya kwi-Ultra-high frequency, ezisetyenziswa ngokubanzi kwi-NFC Field, iNtlawulo yeSelfowuni, uLawulo lokuFikelela, ukulawulwa kwempahla, ulawulo lwempahla, ukugcinwa kunye nolawulo lwempahla, ulawulo lwemfuyo njalo njalo. Sikwanemigca ekhethekileyo yeemveliso zokuthintela iRFID kubandakanya umnini wekhadi leRFID, amakhadi okuthintela iRFID, iipokotho ezivimba uphawu
I-TopTag ayibandakanyi kuphela i-R & D, ukuvelisa, ukuthengisa kodwa ikwabonelela ngenkonzo yokubonisana ngobugcisa kunye nenkxaso. Inkonzo eyenziwe ngokwezifiso iyafumaneka kubathengi bethu ukuba benze ii-tag zabo kunye neelebheli ngokokusebenza, imilo kunye nezinto ezibonakalayo.
Amandla ethu aphambili
Singazenza iithegi zesiko ezona ziguquguqukayo, kunye noyilo, nabuphi na ubungakanani okanye nabuphi na ubungakanani.
Imigca emi-5 yobungcali yokuqinisekisa umgangatho ophakamileyo, amandla amakhulu kunye nexesha elifutshane lokukhokela.
Sebenzisa ngokupheleleyo izibonelelo zemizi-mveliso eyahlukeneyo ukunika eyona mveliso intle ngexabiso elihle.
Inkxaso yegcisa lobuchwephesha kunye neqela elifanelekileyo lokuthengisa.
Impumelelo yabaThengi yimpumelelo yethu, yiyo loo nto eyona nkonzo ibalulekileyo kubathengi.
Igumbi le-1401, iZiko leZhuJiang, iZiko leLongXiang, iSithili seLongGang, iShenzhen, China 518172.
Umnxeba: +86 755 84320826
Inguqulelo yokupakisha ekrelekrele kwiimveliso zonyango kunye nezempilo
I-Recresco isebenzisa inkqubo ye-alarm ye-RFID yokusondela kumzi-mveliso ukunciphisa umngcipheko wokungqubana phakathi kwabantu kunye nezithuthi